LG waxay maamushaa in lagu daro dareeraha sawirka shaashada | Wararka IPhone
LG waxay maamushaa inay ku darto dareeraha faraha shaashadda
Shirkaddii ugu horreysay ee soo saarta taleefan casri ah oo leh aaladda sawirka faraha ayaa ahayd Apple Motorola. Markii dambe, soosaarayaal badan oo sidoo kale ku daray shaqadan sida Apple, Samsung iyo LG, Sony waxay ka mid ahayd shirkadaha qaatay muddada ugu dheer ee ay ku hirgelinaysay Xperia Z5 Soo saare kasta dhig dareemahan faraha faraha aag kale oo qalabka ka mid ah. Apple wuxuu ku fuliyaa badhanka guriga oo ku yaal dhinaca hore ee qalabka sida Samsung oo kale. Soosaarayaasha kale waxay doortaan inay ku rakibaan dhabarka qalabka, wax aanan arag wax qabad ama raaxo leh markii aan furayo qalabka. Sony, dhinaceeda, waxaa ka mid ah dhinaca qalabka, halkaasoo badhanka uu ku daminayo shaashadda uu ku yaallo.
Kuwo badan ayaa ah fikradaha wareega ee toddobaadyadii la soo dhaafay ee ku saabsan sida iPhone-ka soo socda uu noqon karo. Qaarkood waxay ku dhiiradaan inay na tusaan qalab shaashad leh oo daboolaya wejiga oo dhan qalabku waa shay fiicnaan lahaa laakiin sababi lahaa in badhanka guriga loo wareejiyo qayb kale oo qalabka ka mid ah mooyee haddii lagu daro shaashadda, wax u muuqday inaanay suurtogal ahayn muddada gaaban.
Pero parece que haddii ay suurta gal tahay in lagu daro shaashadda sawirka faraha, ugu yaraan sida ay soo bandhigtay LG. Shirkadda Kuuriya ayaa ku guuleysatay inay shaashadda taleefanka casriga ah ku dhejiso dareeraha cabirkiisu yahay 0,03-milimitir. Tiknoolajiyaddan lagu baabtiisay magaca LG Innotek ayaa u oggolaan doonta dhammaan soo saarayaasha, maahan Apple oo keliya, in ay ka faa'iideystaan ​​aaladda qalabka iyada oo lagu darayo shaashad dheeri ah, iyo baabi'inta badhanka jirka oo sidoo kale ah gelitaanka suurtagalka ah ee biyaha iyo boodhka halista gelin kara aaladda hawlgalka isku mid ah.
Afhayeen shirkadeed ayaa sheegay in LG ay horeyba u dhacday ayaa wadahadal kula jira shirkadaha qalabka soo saara kuwaas oo doonaya inay bilaabaan adeegsiga shaashadan cusub oo ay la socdaan dareemayaasha isku dhafan si ay uga bilaabaan suuqa sanadkan. Apple miyuu ka mid noqon doonaa? Bilihii la soo dhaafay, waxyaabo badan ayaa lagu xamanayay shaashadaha cusub ee iPhones mustaqbalka ay hirgelin doonaan, iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadda OLED iyo in ay soo saari doonaan labada Samsung iyo LG. Sida uu sheegayo Tim Cook sanadkan iPhone-ka cusub wuxuu keeni doonaa war muhiim ah. Kani ma midkoodbaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » LG waxay maamushaa inay ku darto dareeraha faraha shaashadda
Apple horey ayey u heysatay taas, waxa dhacaya ayaa ah inay aad uga gaabinayso soo bixidiisa waxayna ku leedahay noocyo horudhac ah, runtiina waxay haysatay shatiyado taas muddo sannado ah, waa waxa dhacaya markii aad qaadanayso shatiyada iyo xanta ah in tartanku dhaafo adiga aayar. Laakiin waa waxa Apple qorsheyneyso inay ka baxdo 7 ama 7s, laakiin sababtoo ah waa gaabis waa waxa ku dhacaya, waxay dooneysaa inay wax walba keydiso oo kaliya ay hal shay ku hesho moodel walba oo xitaa aysan aheyn kaliya cusbooneysiin yar maxaa yeelay waxa dhaca ayaa dhacaya taasi waa horay.
been abuur ah, taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee leh dareeraha faraha ayaa ahaa motorola atrix
Run Hugo, waan dhaafay. Dib loo saxay.
Salaan iyo mahadsanid qoraalka.
Iyo ka hor taleefankii ugu horreeyay ee leh aaladda sawirka faraha, waxaa jiray compqpda ah inaad ku dhejin karto boorsada taleefanka waxa laga yaabo in sidoo kale loo tixgeliyo taleefannada casriga ah, taas oo ah, haddii dareeraha uu xun yahay (dhab ahaantii sida Samsung illaa s6 uu yimid)
Waxaa lagaa rabaa inaad joornaaliiste tahay oo aad u hurto baaritaan intaadan wax qorin. Sidaa awgeed waxaad noogu iftiiminaysaa aqoontaada. Laakiin waa ficil ceeb ah, oo aadan ogeyn in taleefankii ugu horreeyay ee leh aaladda sawirka faraha uu ahaa Motorola atrix. Aad ayey u xun tahay inaad marin u yeelatid baloog sidan oo kale ah oo ha u qaadan waqti yar in aad ku baarto waxa aad qori doontid.
Qiimayn aan shaqsi ahaaneed lahayn oo ah gelinta akhristaha faraha ee dhabarka waa wax aan raaxo lahayn ... Waxaan u maleynayaa inaadan isku dayin, sidoo kale waxaan haystaa iPhone, laakiin markaan soo qaato taleefan casriyeysan oo leh aaladda faaliyaha ama badhanka dhabarka , Waa inaan garwaaqsado inay aniga sifiican iila raaxaysatay.
Ku jawaab asdf
Maxay u noqonaysaa in dadka aan lala socodsiin kahor intaysan dhajin baloog. Hugo waa sax, taleefankii ugu horreeyay ee caqli-gal ah oo faraha lagu sawiro wuxuu ahaa motorola atrix, wuxuu ahaa taleefan casri ah oo wata android. Fadlan taageerayaasha tufaaxa ha ooyin 😉
Nintendo wuxuu sharxayaa sababta loo keenay Isgoyska Xayawaanka oo aanu u keenaynin Mario meeraha moobiilka
Xasiliyahaani waa qalabka ugu dambeeya ee kuwa jecel inay fiidiyowga ka duubaan iPhone-ka.